मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली को-को हट्दैछन् ? यी हुन् रेड जोनका मन्त्रीहरु « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली को-को हट्दैछन् ? यी हुन् रेड जोनका मन्त्रीहरु
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असोज लाग्ने वित्तिकै मन्त्री परिवर्तनको तयारीमा लागेका छन् । अहिले भइरहेका मन्त्रीहरुलाई कुनै कारण दिएर हटाउनुपर्ने भएकाले एउटा मापदण्ड बालुवाटारले तयार गरेको छ ।
दुई वर्ष मन्त्री भइसकेकालाई बिदा दिएर नयाँलाई मौका दिइनेछ । यसरी मापदण्ड बनाउँदा योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, वसन्त नेम्वाङ, शिवमाया तुम्बाहाम्फे मात्र टिक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । भानुभक्त ढकाल पनि झण्डै दुई वर्ष मन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई सञ्चारमा लगेर सरकारको प्रवक्ता बनाउने तयारी भएको छ । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले निरन्तरता पाउने सम्भावना कम छ ।
अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पुनः मौका दिने पक्षमा ओली भएपनि पार्टीभित्र उनीहरुलाई सरकारबाट हटाउन एउटा समूह नै लागेको छ । पोखरेलविरुद्ध पूर्व एमालेको ठुलो तप्का लागेको छ भने बादलविरुद्ध पूर्व माओवादीकै समूह लागेका छन् । दुई वर्ष मन्त्री भइसकेकालाई बिदा गर्ने मापदण्ड अनुसार मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन भएमा पोखरेल र बादल पनि सरकारमा रहने छैनन् ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २८, २०७७ आईतबार ९ : १६ बजे